The ọhụrụ 27-inch iMac ga-agbakwunye ubé dị iche iche na agba ndị dị ugbu a | esi m na mac
Ọtụtụ nkwụsị nkeji ikpeazụ gosiri na mbata nke ọhụrụ 27-inch iMac ụdị (nke nwere ike ibu ibu) bụ dị nso nso na mmalite nke mmepụta oke nke otu na ugbu a ha na-ekwu na agba nwekwara ike ịbụ protagonists nke ọhụrụ ndị a otu.
Ma ọ bụ na kemgbe mmalite nke 24-inch iMac dị iche iche na agba, o yiri ka Apple na-emekarị ga-kpọmkwem nke a, na-enye continuity na ihe malitere. N'ezie otu ọhụrụ 27 ma ọ bụ 30 inch ga-abata n'ime afọ na-abịa, ma o doro anya na ihe niile ga-adabere na ụkọ nke components na nkọwa ndị ọzọ na-agbanarị Apple n'onwe ya. Ha nwere ike wepụta ha, chekwaa ole na ole, ma gaa ntakịrị na njem dabere na ire ere.
Agba ndị ahụ ee, mana ọ nwere ike ịdị nro karịa maka ụdị buru ibu
Ma ihe dị mkpa ugbu a bụ ịmara dị ka o kwere mee nke nkọwa nke nwere ike itinye n'ime ngwá ọrụ ọhụrụ a na o yiri ka ha agaghị abụ kpọmkwem otu agba nke anyị nwere na ụdị ugbu a. Onye ọrụ Twitter @dylandkt kwuru izu ole na ole gara aga iMac nke inch 27 ọhụrụ ga-agbakwunye ụdị ihe ahụ na iMac 24-inch dị ugbu a. nke ewepụtara na mbido afọ a, mana jiri palette agba dị ntakịrị karịa ma ọ bụ karịa. Nke a na ha na-echeta taa si MacRumors.
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na Apple gbakwunyere agba na ụdị iMac ọhụrụ buru ibu, mana ọ nwekwara ike ịdị mma ma ọ bụrụ na ụdị ndị a dịtụ iche na agba karịa ụdị dị ugbu a. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike ịmasị ha mana mgbe niile ọ ka mma inwe ọtụtụ ụdị agba dị. Ihe doro anya ma kwenye bụ na iMac ndị a ga-ebugo ndị na-arụ ọrụ Apple, Apple Silicon na ha mgbanwe ga-abịa na mpaghara Mac ndị ọzọ n'afọ. Ike, arụmọrụ na ọnụ ahịa dị ọnụ ala na-aga n'aka na ndị nrụpụta Apple M-usoro ndị a dị ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » iMac » IMac ọhụrụ 27-inch ga-agbakwunye agba dị iche iche na ndị dị ugbu a
Otu esi etinye vidiyo na mmegharị ngwa ngwa na Mac